Ratsy Endrika Kokoa Fa Tsy Mahafinaritra: Ny Fomba Fiasan’ny Fanjakana Holandey Manoloana ny Fomba Amam-panao Pete Mainty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Oktobra 2016 5:28 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Română , Català, English
“Masindahy Nicholas” sy ny mpanampy azy “Pete Mainty” — “endrika mainty miverimberina miseho isan-taona” ao Holandy. Sary: Michell Zappa (CC BY-SA 2.0 ), Wikimedia Commons
Satria nifarana ny vakansin'ny vanin-taona mafana ary mitohy ny fiainana mahazatra ao Holandy, zavatra roa no azon'ny Holandey antenaina: ny fivoahan'ny pepernoten [voanjo dipoavatra] sy ny tarehintsoratra sôkôlà mialoha loatra any amin'ny toeram-pivarotana lehibe, sy ny firongatry ny adihevitra miompana amin'i Pete Mainty na “Zwarte Piet “, araka ny iantsoana azy ao Holandy.
Izy roa ireo dia samy misy ifandraisany amin'ny fankalazana ny 5 Desambra amin'ny fetin'i Masindahy Nicholas, mitovy amin'ny Dadabe Noely any Eoropa Avaratra, nofaritan'i David Sedaris tamin'ny famaritana mampihomehy ny fety ho “diso manify sy tsy [mitafy] tahaka ny Papa”. Efa namoaka [mg] lahatsoratra momba ity fety fomban-drazana ity ny Gobal Voices tany aloha tany.
Amin'ny ankapobeny, nofaritana ho mpanampin'i Masindahy Nicholas i Pete Mainty, tonga miaraka aminy ao an-tsambo avy any Espaina, ary mitondra fanomezana sy vatomamy ho an'ny ankizy mahafinaritra. Mety hoentina miverina any Espaina na – mety ho ratsy kokoa – tsy mahazo vatomamy ny ankizy maditra .
“Na inona na inona anton'ny volon-kodiny, miseho miverimberina isan-taona amin'ny endrika mainty ao amin'ny firenena i Pete izay mamaritra ny tenany amin'ny ankapobeny fa mandefitra, malala-tsaina, sy tsy-manavakavaka.”
Maro ny antony mahatonga ny fahamaintisan'i Pete toy ny maha-Moor azy, na ny endriny voaloko mainty noho ny fitsofohana anaty fivoahan-tsetroka hametrahana fanomezana sy vatomamy mangingina ao an-trano. (Amin'ny antony hafa, mitaingina ny soavaliny eny ambony tafon-trano i Masindahy Nicholas, afaka manazava i David Sedaris). Na inona na inona anton'ny volon-kodiny, miseho miverimberina isan-taona amin'ny endrika mainty ao amin'ny firenena i Pete izay mamaritra ny tenany amin'ny ankapobeny fa mandefitra, malala-tsaina, sy tsy-manavakavaka.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, nivaky roa i Holandy: ny iray milaza fa mpanavakavam-bolo-koditra ny fomba amam-panao Pete Mainty [mg] ny iray hafa milaza fa fomba amam-panao Holandey tsy mampidi-doza izany. Samy manana ny fanentanany sy ny olo-malazany ny roa tonta milaza ny fijerin'izy ireo amin'ny adihevitra isan-karazany momba izany ary mety hitohy hatramin'ny 5 Desambra izany.
Nisy ny fomba fijery mahaliana avy amin'ny Mpiaro ny Zon'ny Ankizy tamin'ity taona ity, izay namoaka tatitra (amin'ny teny Holandey) milaza fa tokony hisy ny fanovàna ny fomba amam-panao Pete Mainty. Nanamarika ity mpiaro ny ankizy ity fa tsy nisy ny fikarohana sahaza natao mba hijerena raha misy fiantraikany ratsy amin'ny ankizy ny fomba fankalazana ny fetin'i Masindahy Nicholas ankehitriny na tsia. Na izany aza, nofaranany fa tamin'ny resaka niarahana tamin'ny ankizy dia miha-iharan'ny fanavakavahana ireo ankizy tsy fotsy rehefa fety. Nilaza ny tatitra fa manitsakitsaka ny andraikitr'i Holandy amin'ny Dina momba ny zon'ny Ankizy, indrindra ny andininy faha- 2, 3 sy 6 ny fomba amam-panao ankehitriny. Taorian'ny famoahana ny tatitra, nahazo fandrahonana maro ny mpiaro ny zon'ny ankizy.
“Namehy ny mpiaro ny ankizy fa tamin'ny resaka niarahana tamin'ny ankizy dia miha-iharan'ny fanavakavahana ireo ankizy tsy fotsy rehefa fety.”
Nahasarika ny saina tao anatin'ny taona vitsy lasa teo amin'ireo sampana mpiaro ny zon'olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana ny resaka Pete Mainty. Tamin'ny 2014, nanatontosa fitsidihana ofisialy tany Holandy ny Vondron'asan'ny Manam-pahaizana momba ny olombelona Taranaka Afrikanina ao amin'ny Firenena Mikambana. Tamin'ny fanambarana natao taorian'ny fitsidihana, nolazain'ny Vondron'asa ny finiavana tsy mijery ny fomban-drazana Pete Mainty eo amin'ny olom-pirenena Holandey marobe.
“Ny zava-misy dia tsy misy firenena afaka amin'ny fanavakavaham-bolonkoditra ary tsy miavaka amin'izany i Holandy,” hoy ny voalazan'ny fanambarana. “Saingy ho an'ny firenena manana fomban-drazana hatry ny ela amin'ny fandeferana sy ny fisokafana, mahagaga sy mampiahiahy ny fahanginana manodidina ny fanavakavahana sy ny fanilikilihana ara-poko. Miantraika any amin'ny fanairana sy ny fironana avy amin'ny fomban-kolontsaina sy ny fimaroana ara-kolotsaina ao amin'ny Fanjakana izany araka ny navoakan'ny adihevitra mikasika ny fankalazana an'i Pete Mainty (Zwarte Piet). “
Nitatitra teo aloha ny Vondron'asa fa lasibatry ny fandrahonana izy rehefa nisy nahafantatra ny famotorana nataony tamin'ny fitoriana napetraka momba ny fanehoana an'i Pete Mainty. Naneho hevitra ilay politisianina elatra havanana Geert Wilders fa “tsara kokoa ny mandao ny Firenena Mikambana noho ny miala amin'i Pete Mainty.”
Nandrisika ny fanjakana Holandey ny Vaomieran'ny Fanafoanana ny Fanavakavahana ara-poko, tamin'ny fehin-keviny nivoaka tamin'ny taona 2015 tamin'ny tatitra ara-potoana ao Holandy momba ny fanajany ny Fifanekena Iraisam-pirenena amin'ny Fanafoanana ny endri-panavakavahana Ara-poko amin'ny endriny rehetra mba ….hampiroborobo am-pivitrihana ny fanafoanana ireo fanehoana ny endrik'i Pete Mainty mitaratra ny fitsarana an-tendrony ratsy sy iainan'ny olona maro taranaka Afrikanina ho toy ny sisa niangana tamin'ny fanandevozana. “
Nitsipaka ny hevitra handràra ny Pete Mainty ny governemanta, saingy nilaza fa “hampiroborobo ny fifanakalozan-kevitra momba ny fanavakavaham-bolonkoditra izany na dia mahasadaikatra aza izany.”
“Tsy niteraka fahatokisana loatra ny valinteny ofisialy avy ao Holandy raha jerena ny tatitra (fitoriana) mivoaka matetika amin'ny fandraràna tanteraka, na ny fitsabahan'ny polisy amin'ny fihetsiketsehana manohitra ny Pete Mainty, sy ny tsy fisian'ny famotorana manoloana ny fandrahonana natao tamin'ireo manohitra ny fomban-drazana.”
Tsy niteraka fahatokisana loatra ny valinteny ofisialy avy ao Holandy raha jerena ny tatitra (fitoriana) mivoaka matetika amin'ny fandraràna tanteraka, na ny fitsabahan'ny polisy amin'ny fihetsiketsehana manohitra ny Pete Mainty, sy ny tsy fisian'ny famotorana manoloana ny fandrahonana natao tamin'ireo manohitra ny fomban-drazana.
Toa mampiseho ny tsy fahampian'ny fahalalan'ny fanjakana Holandey amin'ny adidiny amin'ny lalàna iraisam-pirenena—ankoatra ny Fifanekena voalaza etsy ambony, dia tonga ao an-tsaina ny Fifanekena Iraisampirenena momba ny Zo ara-tSivily sy ara-Politika sy ny Fifanekena Eoropeana momba ny Zon'Olombelona—na fara faharatsiny ny tsy fahavononana hampihatra azy ireo am-pahombiazana. Manaitra loatra izany saingy mbola manaitra bebe kokoa ho an'ilay firenena niavian'ilay lalàna iraisampirenena sy fireharehany tenany amin'ny fomban-drazany mankany amin'ny fisokafan-tsaina sy ny fanandratana ny zon'olombelona.
Ny fanontaniana lehibe dia: ahoana ny manaraka? Kely ny vokatra azon'ny fitondrana azy teny amin'ny fitsarana. Toa mirona mankany amin'ny tokony ikarohan'ny “fiarahamonina” vahaolana ny Fitsarana Holandey fa tsy manery ny governemanta hanao izany, saingy toa misara-kevitra loatra ny fiarahamonina Holandey amin'ny hanombohana resaka mitondra vahaolana. Mandritra izany fotoana izany, misy ny porofo fa misy fiantraikany ratsy eo amin'ny tanora ao amin'ny firenena ilay noheverina ho fetin'ny ankizy. Tsy tokony handray an-tanana hamaha ity olana ity ve ny governemanta Holandey?
Raha tsy izany, ho anjaran'i Masindahy Nicholas sy Pete Mainty ny mirotsaka an-tsehatra: mangorona ny governemanta ao anaty harona ary mamerina azy ireo any Espaina, miaraka amin'ny ankizy maditra rehetra.